क्वारेन्टाइनमा कसरी फिट एण्ड फाइन रहने ? - स्वास्थ्य जानकारी - नारी
क्वारेन्टाइनमा कसरी फिट एण्ड फाइन रहने ?
चैत्र २७, २०७६ लकडाउनका बेला स्वास्थ्यमा समस्या आयो भने के गर्ने ? धेरैका लागि यो टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । किनभने अहिले घर बाहिर हिँडडुल गर्न सहज छैन । गाडी पाइँदैन । अस्पतालसम्म पुग्नै गाह्रो छ । अस्पतालमा उपचार गर्न पनि सजिलो छैन ।
घर र अस्पताल आउजाउ गर्दा कोरोना भाइरस भित्रिने जोखिम पनि छ । त्यसैले घरमै बसेर कसरी आफूलाई फिट एण्ड फाइन राख्ने भन्ने कुरामा सचेत रहन जरुरी छ । रोग किन लाग्छ ? यसको सोझो जवाफ हो, हाम्रो आफ्नै कमजोरीले । अर्थात खानपान, दिन चर्या आदिमा हुने गडबडीले ।
अब कसरी फिट एन्ड फाइन रहने त ? यस्तो उपाय :
(विभिन्न चिकित्सकसँगको कुराकानीका आधारमा)